रोचक / विचित्र Archives - Page 318 of 320 -
५० वर्ष पहिले यस्तो थियो पर्यटकीय नगरी पोखरा (फोटो सहित)
पोखरा : समय संगै हरेक कुरा परिवर्तन हुँदै जान्छ । परिवर्तन नै संसारको नियम हो भने झैँ ५० वर्ष पहिले र अहिलेको पोखरा हेर्दा आकाश जमिनको फरक देख्न सकिन्छ । ५० वर्ष भन्दा पहिले खिचिएका […]
युरोपेली देशमा प्रेमी प्रमिकाबीच शारीरिक सम्बन्ध हुनु सामान्य मानिन्छ । तर आफ्ना भर्जिन तर अत्याधिक तौल भएका प्रेमीसँग यौन सम्बन्ध राख्दा एक युवतीले झण्डै ज्यान गुमाउनु परेको तथ्य बाहिर आएको छ । मोटे प्रेमीसँग यौन […]
महको प्रयोग विभिन्न रोगका औषधीका लागी समेत गरिन्छ । तर मह खाने तरिकाले पनि स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने या नराम्रो गर्ने भन्ने कुरा फरक पर्छ । मह खाँदा विचार पुर्याउन नसके स्वास्थ्यलाई फाइदा भने गर्दैन । […]
यी ६ कारणले जन्मिन्छन जुम्ल्याहा सन्तान
केही मिडिया रिपोर्ट अनुसार नायिका सेलिना जेट्लीले दोस्रो पटक जुम्ल्याहा सन्तानलाई जन्म दिँदैछिन् । दोस्रो पटक पनि जुम्ल्याहा सन्तानकी आमा बन्न लागेकोमा आखिर किन र कसरी कोही महिलाले एकभन्दा बढि सन्तान जन्माउँछन् । यस प्याकेजमार्फत […]
जमिनभन्दा दुई फिट उचाइमा हावामै अड्किएको छ यो अचम्मको ढुंगा, कारण भने यस्तो छ
आज हामी यस्तो ठाँउको बारेमा जानकारी दिदैछौँ जहाँ हावामा ढुंगा अडिएको छ । सुन्दा यो कुरा केही चमत्कारी र अविश्वनिय लाग्छ । तर यो सत्य कुरा हो । सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती […]
जनावरले यसरी गर्छन् आफ्नो प्रेमको अभिव्यक्ति
हुन त संसारमा हरेक व्यक्ति प्रेमबिना एक्लो र अधुरो महसुस गर्दछ, त्यसैले मानिसहरु प्रेमिकादेखि श्रीमतीसँग वा प्रेमीदेखि श्रीमानमा त्यस्तो प्रेमको खोजी गरिरहेको हुन्छ । तर यदि तपाईंले प्रेम गर्ने सम्पूर्ण अधिकार मानवमा मात्र निहित हुन्छ […]
लालीगुराँस स्वास्थ्यका लागि लाभदायक, हेर्नुस यी ८ रोगको लागि नभई नहुने
May 28, 2017 Spnews 0
काठमाडौँ – यतिबेला गुराँस फूल्ने मौसम सुरु भइसकेको छ । पहाडी क्षेत्रमा ढकमक्क गुराँस फूलेर जंगलनै हराभरा भएको होलान् । यो जंगलमा फुल्ने यस्तो फूल हो, जसको सौन्दर्यमा जो कोहि मोहित हुन्छन् । त्यसो त […]
दाह्री नआएर टेन्सन भयो ? यस्तो घरेलु उपाय अपनाउनुहोस
कसैलाई दाह्री नभएर पनि समस्यामा छन् । कतिपयलाई दाह्री भएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ । विभिन्न किसिमका तरिकाहरु अपनाएर दाह्री ठूला बनाउने असफल प्रयास गरिरहेका हुन्छ । यो समस्या समाधान अर्थात दाह्री […]
आखिर किन टिक्दैन प्रेम विवाह ? जानी राखौ
धेरैजसो प्रेमविवाहमा विवाहभन्दा पहिले पुरुषहरु महिलासामू ठिक त्यसरी पेश आउँछन् जसरी महिलाहरु चाहन्छन् । प्रेमका कारण महिला पनि पुरुषलाई विश्वास गरिरहेका हुन्छन् । तर, यस्तो गर्नुपूर्व तपाईंले सोच्न आवश्यक छ किनभने ९० प्रतिशत पुरुषहरुले तपाईंलाई […]
किन लगाइन्छ निधारमा तिलक ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण
निधारमा तिलक लगाउन हिन्दु धर्मको एक पहिचान हो । हिन्दु धर्मवलम्वीहरुले निधरकोबीच भागमा तिलक लगाउने गर्छन । हिन्दु धर्म मान्ने मानिसहरुले विहान तिलक लगाउने गर्छन् । तिलक बेसार, सिन्दुर, केशर, खरानी र चन्दन आदी मिसाएर […]